Ikhaya Lomlando Elinomzila Wesitimela kanye Nokufinyelela Komfula
Williamsburg, Pennsylvania, i-United States
Ukushayela zonke izinhlobo zangaphandle, abathanda umlando, abathanda izitimela, noPenn Staters - I-Ganister House ikulungele! Yenza izinkumbulo ezithile kuleli khaya lomlando eliyingqayizivele nelilungele umndeni. Ekuqaleni isiza sekhabethe lamalogi ngeminyaka yawo-1790s, leli khaya manje selinamagumbi okulala ama-en-suite ama-3 kanye nenqwaba yezindawo zokuhlangana, okubandakanya igceke elikhulu elibiyelwe elinendawo yomlilo. Finyelela kalula emiseleni yomlando nezindawo zikaloliwe, amamayela emifula nemizila yokuhamba izintaba, izindawo zegeyimu yezwe, futhi uze ufike kumdlalo we-PSU emizuzwini engama-45!
Isitezi sokuqala sifaka igumbi lokuhlala / umtapo wolwazi, igumbi lokudlela elinepiyano elihlala 8+, ikhishi elikhulu lokudlela, igumbi lelanga, igumbi lokuhlanza izingubo, igumbi lodaka kanye negumbi lempuphu. Isitezi sesibili sinamagumbi okulala ama-en-suite ama-3; 1 inombhede wenkosi nombhede wosuku one-trundle kanti abanye ababili banemibhede ephindwe kabili. Izikhala ezingaphandle zifaka igceke elibiyelwe ngokuphelele ngaphakathi kanye ne-patio yangaphambili.
Itholakala edolobhaneni laseGanister, imayela elingu-1 ngaphandle kwaseWilliamsburg, e-PA, ngqo kumzila wesitimela.
Hi there! My siblings and I are originally from Blair County, PA and enjoy getting together to tell embarrassing stories about each other, whether that's back in our homeland or anywhere else we are able to join forces.
UJohn uhlala eduze futhi angatholakala uma kudingeka